လွတ်လပ်စိုး – ဦးမာဃရဲ့ သင်္ကြန်ဖီလင် | MoeMaKa Burmese News & Media
လွတ်လပ်စိုး – ဦးမာဃရဲ့ သင်္ကြန်ဖီလင်
လွတ်လပ်စိုး၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၄
ဒီနှစ် ဦးမာဃတို့ လူ့ပြည်ကို ဆင်းဖို့ တအားကို တက်ကြွနေခဲ့တယ်။ လူ့ပြည်ဆင်းတုန်းအချိန်မှာ အလန်းဇယားဖြစ်ဖို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေလည်း လုပ်နေရတာ ဖတ်ဖတ်ကို မောရောပဲ။ မပြင်ဆင်လို့ ဖြစ်မလား ဟို ပြည်သူ့အတွက် တွင်းနက်ဆိုလား ဘာဆိုလား TV Channel တစ်ခုက လွှင့်နေတယ်လေ။ သင်္ကြန်အကြို ပြင်ဆင်မှု ပုံရိပ်များ….ဆိုပြီး ။ လန်းလိုက်တဲ့ အလန်းဇယားလေးတွေဆိုတာ ဦးမာဃရဲ့ စံအိမ်တော်ရှေ့ ရေကန်ထဲက ပိုးလောက်လန်းလေးတွေအတိုင်းပဲ ထွန့်တလွန့်လွန့် လူးလို့ကိုး။ လူ့ပြည်ဆင်းဖို့ သိပ်တက်ကြွနေတဲ့ ပုံစံကို သုဇိတာဆိုတဲ့ Exp date ဖြစ်နေတဲ့ အမယ်အို မရိပ်မိအောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေး လုပ်နေရတာ စိတ်မောလိုက်တာဗျာ။
အကြိုနေ့ညနေရောက်တော့ မနှစ်သင်္ကြန်တုန်းက မဏ္ဍပ်ကြီးတစ်ခုမှာ စတိတ်ရှိုးကြည့်နေတုန်း ဦးထုပ်အနားပြားကြီးကြီးဆောင်း၊ နေကာမျက်မှန်အမဲကြီးတပ်လို့ ပန်းကုံးတွေ လည်ပင်းမြုပ်မတတ် ဖြစ်နေတဲ့ ခရုနီ ဆိုလား ခရုဖြူဆိုလား အဲ…အဲဒီလူကြီး လှုလိုက်တဲ့ ပြိုင်ကား ဖြူဖြူကြီးကို အောက်တိန်းအပြည့်ဖြည့်လို့ ဆင်းတော့မယ် ဟဲ့ … လို့ အံခဲလိုက်သကိုး။ အဲဒီတုန်းက သုံးသိန်းစနစ် မရှိသေးဘူးကွဲ့…ကလေးတို့ရဲ့။
ဘယ်…နှစ်တိုင်း ဟိုအကောင် ဒီအကောင် နားရွက်ကိုင် ဆင်းလိုက်၊ ဂျိုကိုင်ဆင်းလိုက်နဲ့…နတ်ဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်စော်နံနေတာ ကြာလှပေါ့။ ဒီနှစ်တော့ လုံးဝ အလန်းပဲကွ…အလန်းပဲ။ မနှစ်သင်္ကြန်တုန်းကပဲ…အတက်နေ့မှာ မော်ဒယ် ပိန်ညော်ညော်လေးတစ်ယောက် ညုတုတုနဲ့ သူ့ အိတ်ကပ်ထဲ ထိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ iphone လေးကိုလည်း charging သွင်းရသေးတယ်။ charing ကြိုးလည်း မေ့လို့မဖြစ်ဘူး။ မီးတွေက ပြန်ပျက်နေတယ်ဆိုပဲ။ တော်ကြာ အားသွင်းလို့မရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…ဒီတော့ ဘက်ထရီတုံးလည်း အပိုဆောင်သွားရမယ်။ ရေသဘင်မျက်မှန်တွေ၊ ရေစိုခံ ဖုန်းအိတ်တွေ၊ သင်္ကြန်လည်ရင်း အဆင့်အတန်းမှီမှီ စီးမယ့် sketcher shoes စတဲ့ accessories တိုလီမိုလီတွေကိုလည်း ခါးပုံစကြားမှာ ဟိုဖွက်ဒီဖွက်နဲ့ပေါ့။
ဆင်းပြီဟေ့…ဆင်းပြီ….အော် ….ဦးမာဃဆိုတဲ့ ငါ သိကြားမင်း ဆင်းပြီ … ပြောတာပါဟယ်… နင်တို့ကလည်း ဘယ်သူတွေ ဆင်းတယ် ထင်ကြလို့တုန်း။
လူ့ပြည်ရောက်ပြီ…ပြိုင်ကားကြီး တုံ့ခနဲဖြစ်အောင် ရပ်သွားတယ်…။ ဟိုက် ရှားပါး….အင်း ဒီနှစ်က ရှားပါးတဲ့နှစ်ကိုး…လူ့အခွင့်အရေးလေ…အဲ…ဟုတ်ပေါင် ယောင်လို့။ ဟိုက် ရှားပါး…. အပြာရောင်လေးတွေ… အပြာလေးတွေကွ… ၀ဲခနဲ ၀ဲခနဲပဲ…ဆံပင်လေးတွေ ပြောပါတယ်။ ဦးမာဃတော့ ပါလာတဲ့ iphone ထုတ်…လက်စွမ်းပြပြီကွ။ ဘာရမလဲ…ဒါတွေ သိလို့ memory card တောင် အပိုဆောင်လာခဲ့သေးတယ်။ အဲ….ဟိုမှာ ခုန်လိုက်တိုင်း…ခုန်လိုက်တိုင်း ပျံတက်သွားတဲ့…ခပ်ပါးပါးလေးက ဘာလေးလဲ။ အော်…ပုဝါလေး ပုဝါလေး…တော်ပါသေးရဲ့။ ဒီနှစ်တော့ လူ့ပြည်က သင်္ကြန်ပွဲ…သုဇိတာနဲ့ မလဲ….အဲ…ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်တော့ပါဘူးကွယ်။
အကြတ်နေ့လည်း နေပြည်တော်ဘက်ပြေးလိုက်၊ အတက်နေ့တော့ မန္တလေးတက်လိုက်နဲ့…ဟန်ကို ကျလို့။ ပြိုင်ကားကြီး တန်ခိုး…ခရုနီ တန်ခိုးတွေကွ….နော်။ အဲ အတက်နေ့ ညနေ မဏ္ဍပ်တွေ သိမ်းပြီ … ဖြတ်ထားတဲ့ ဖဲကြိုးတွေ ပြန်ဆက်တဲ့ ပွဲ…အော်…မဟုတ်ပါဘူး…မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် ပိတ်ပွဲတွေ…။ ငါ့နှယ် ဒီနှစ် အကြိုနေ့ထဲက မငြိမ်တဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးက တဒုန်းဒုန်းနဲ့….ဘာဖြစ်တယ် မသိပါဘူး။
အဲ….နှစ်တိုင်း လုပ်ရမယ့် ဂျူတီလေး ထမ်းဆောင်လိုက်ဥင်္ီးမှ။
ငါ့ရဲ့ ခွေးသားရေတွေ….နွားသားရေတွေ…. ဘယ်မှာပါလိမ့်။ ကဲ…ကောင်းရော….ပါကို မလာတော့ပါလား။
ပြိုင်ကားကြီး သနေရတာနဲ့….iphone အားသွင်းနေရတာနဲ့…မေ့ခဲ့ပဟေ့။ ရတယ် …ရတယ်….iphone နဲ့ပဲ မှတ်တမ်းတင်တော့မယ်….အဲ…ဒွတ်ခပဲ….memory card တွေလည်း ကုန်ပြီ။
အိုး….ဘာ အရေးလဲ။ နတ်သဘင်လွှတ်တော်ကျရင် လူ့ပြည်ကြီး အင်မတန် တိုးတက် ကောင်းစားနေပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ကြည့်ရှုစောင်မမယ့်…… မြေသိမ်းခံတွေကို လျော်ကြေးတွေ ပေးမယ့်… လက်ပံတောင်းတောင်ကြီးကို ခေတ်မီပြီး ဖွံ့ဖြိုးသော ဒေသကြီးဖြစ်အောင် တည်ထောင်အံ့ဆိုတဲ့ ကယ်တင်ရေးသမား လူသူတော်ကောင်းကြီးတွေပဲ ပေါများသထက် ပေါများလာနေကြောင်း၊ နောက်နှစ်ဆိုရင် ဒီထက်မက ပိုပြောင်သလင်းခါနိုင်ဖွယ်…. အဲ… ပို ပြောင်ရောင်လာဖွယ် ရှိတဲ့ ပြည်ကြီး ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း…. ခပ်တည်တည်နဲ့ report ကောင်းကောင်း ရေးတင်လိုက်ရုံပ။ ဒီနည်းလည်း လူ့ပြည်က NGO, INGO တွေဆီက တတ်လာတဲ့ နည်းပဲလေ။
ပြန်ပါဦးမယ်…ပြန်ဦးမယ်…မာဃပြန်ဦးမယ်…လမ်းခရီးမှာ iphone ကို သုဇိတာက စစ်ဆေးရေးဝင်ပြီး select all+ Delete လုပ်ပစ်မယ့်ရန်ကို ကြိုတင် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ အသင့်ဆောင်လာတဲ့ memory stick ထဲကို data တွေ ပြောင်းထည့်ထားလိုက်ဦးမှ။ ဒီအမယ်ကြီး အကုန် သိနေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ…ကျုပ် ဂွမ်းသွားမှာပေါ့…သိလည်း မသိပါဘူး….သူက exp date ဖြစ်နေပြီကိုး…. လာပြီကွ…. ကိုယ် ပြန်လာပြီ… မာဃ ပြန်လာပြီ…. ကိုယ်တို့ရဲ့ နတ်ပြည်ဆီ….။
One Response to လွတ်လပ်စိုး – ဦးမာဃရဲ့ သင်္ကြန်ဖီလင်
pn wara on April 20, 2014 at 1:30 pm
ကောင်းပါသော်ကော လွတ်လပ်စိုး ရေ- ကျုပ်က ဒါမျိုးတွေဘဲ ဖတ်ချင်တာ- ဟို ဂျော်ဒီး က ဘယ်ရောက်နေလဲ မသိဘူး- တာတေ တော့ မရှိရှာတော့ဘူး- သူ ရေးနေကျ မဂ္ဂဇင်းက ဘာတွေ သဘောတူညီချက်ယူထားလဲ မသိဘူး-